QM oo walwal ka muujisay qasaaraha dadka rayidka ee Muqdisho - BBC News Somali
QM oo walwal ka muujisay qasaaraha dadka rayidka ee Muqdisho
Dagaalladii iyo duqeyntii ka dhacay Muqdisho toddobaadkan horraantiisii ayaa la sheegay in ay ku dhinteen ugu yaraan 60 ruux oo u badan haween iyo carruur, ayna ku dhaawacmeen 120 kale. Sidaa uu sheegay xafiiska QM u qaabbilsan isuduwidda arrimaha aadaminnimo ee Soomaaliya.
Hal isbitaal oo ku yaal Muqdisho ayaa maalimihii kowda iyo labada bishan July waxaa la geeyay 42 ruux oo dhaawac ah oo 23 ka mid ahi ay yihiin haween iyo carruur aan gaarin 14 sano.
Sannadkan kala barka maraya, 450 haween iyo carruur ah oo dhaawac ah, ayaa la geeyay isla isbitaalkaas, iyada oo Isbitaallada kalena ay sheegeen in ay korortay tirada dadka dhaawaca ah ee ay aqbaleen.
QM, waxay ku tilmaantay in tiradani ay muujineyso khasaaraha weyn ee dadka rayidka ah ka soo gaaraya dagaalka ka socda Muqdisho.
Sida BBC ka war hayso, dadka rayidka ah ee dagaalka ku dhintay waxaa inta badan laayay madaafiicda aan bartilmaameedka lahayn.
Maxamed Axmed Qaddiim iyo Madiina Xasan Maxamuud, oo ah laba ruux oo waayeel ah oo isqaba, ayaa ka mid ah dadka ay madaafiicdu dileen.
Gurigooda hortiisa nin marayay oo rayid ah ayaa madfac ku dul habsaday.
Maxamed Axmed Qaddiim iyo xaaskiisa Madiina, waxay u gurmadeen qofkii madfucu ku dhacay, ka dibna iyaga ayaa madfac ku soo dhacay labadiibana waxay ku dhinteen gurigooda hortiisa.
Maxamed Axmed Qaddiim, wuxuu ahaa 77 jir, xaaskiisa Madiina Xassan Maxamuud, waxay ahayd 71 jir, waxayna degganaayeen xaafadda Suuq-Bacaad ee degmada Yaaqshiid.
Su'aashu waxay tahay yaa ka mas'uul ah dilka dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ee iyaga oo guryahooda iyo suuqyadooda ku sugan madaafiicda lagu dilayo? maxaase qaramada midoobay qorshe u ah in ay ka qabato tacadiyada lagula kacayo dadka rayidka ah aan ka ahayn warbixinno laga soo saaro tirakoobka dadkan iwm?